I-AZ yamagama abelusi baseJalimane (Amagama angama-150 + Owesilisa, Owesifazane NamaPuppy GSD) - Amagama Ezinja
Uyemukelwa kuhlu lwe-All Things Dogs 'A-Z lwamagama abelusi amahle kakhulu aseJalimane anamagama angaphezu kuka-150 amnandi, ahlukile futhi amahle nge-German Shepherd Dog yakho (GSD).
Ngakho-ke uthathe isinqumo sokuthola noma ukuthenga Inja Yabelusi BaseJalimane , omunye wemisebenzi yakho yokuqala, njengomzali wesilwane, kuzoba ukumnika igama lakhe.
Ngokufana nokukhetha igama lengane yakho, abazali bezilwane ezifuywayo banganciphisa amagama ezinja ngalokho okuzwakala kungunaphakade!
Uma ucabanga ngamagama abelusi baseJalimane, uzofuna ukucabanga ngobuntu nenja yakho; ufuna igama elifanelana nesimo sakhe sengqondo nesimo sakhe sengqondo ngempilo.
Abelusi baseJalimane bayathandwa ukuzethemba kwabo nesibindi .
Amagama Omalusi AseJalimane
Amagama aphezulu angu-10 aseGerman Shepherd
Amagama Ezinja ZaseJalimane
Amagama Abelusi Abesilisa BaseJalimane
Amagama Omalusi Abesifazane baseJalimane
Amagama Omdlwane Wamalusi WaseJalimane
Amagama Omfana Wamalusi WaseJalimane
Amagama Amantombazane Omalusi AseJalimane
Amagama Omalusi AseJalimane Ahle
Amagama Omalusi Abamnyama AbamaJalimane
Amagama Abelusi Abamhlophe baseJalimane
Ngenkathi kunemithetho ethile engabhalwanga yamagama wezinja zaseJalimane i-Shepherd Dogs, njengokuqinisekisa ukuthi ukhetha igama ongeke ube namahloni ukumemeza kulo lonke ipaki lezinja, noma uvikele amagama azwakala njengemiyalo ejwayelekile. Ngokuvamile, ngamaGerman Shepherd Names, noma yini iyahamba.
Ucwaningo lwamuva luthole i- amagama athandwa kakhulu ayishumi wezinja zaseJalimane:
Uma ufuna igama elihlukile ngokuhlukile, ukufanisa ubuntu benja yakho , esikhundleni samagama abelusi baseJalimane athandwa kakhulu, bese uzama uhlu lwethu ngezansi:
Ukufuna Amagama Abelusi Abesilisa baseJalimane azolingana ngokuphelele ngoba lokhu kuzala ’isibindi , amandla nobuhlakani? Noma iliphi igama kulolu hlu lizolingana ngokuphelele:
U-Arnold - ungabaqamba ngegama likaSchwarzenegger, kodwa, empeleni lisho ukuthi “amandla okhozi!”
I-Axel - ubaba wokuthula
UBernard - uphelele uMelusi empilweni yakho, leli gama lisho ukuqina nesibindi
Bruno - Enjeni enesibindi, leli gama lisho isihlangu noma izikhali
UDedrick - umbusi onesiphiwo
UFranz - Ulungele ukuzijabulisa futhi i-GSD enenhlanhla empilweni yakho , leli gama lisho ukuthi “mahhala!”
UKlaus - umuntu osebenzela umphakathi wakubo; ilungele i-GSD ethembekile futhi enothando!
ULeonard - unenhliziyo yengonyama
UMax - “omkhulu kunabo bonke!” Ngabe sidinga ukusho okuningi?
UManfred - “amandla nokuthula!”
Otto - okusho “ukuchuma”
USigmund - umdlali wasemuva onqobayo
UWilhelm - umvikeli oqinile
UWolfgang - UMozart noma ubani?
Ingabe ungumnikazi oziqhenyayo wenja yezinja yaseJalimane enamandla futhi ezimele? Lawa magama azogcina isimo sakhe somuntu wesifazane esiqinile ngenkathi ekhombisa ubufazi bakhe:
Yebo - muhle
I-Anja - ilungele iqabane elithulile nelinesibindi
UChrista - “okhethiweyo” ofanele i- inja yokukhosela osanda kuyisindisa ?
U-Erna - Kuwo wonke lawa Magama aseGerman Shepherd, leli gama lingelenja engenakwesaba nokuzethemba
U-Edith - Igama elifanelekayo nganoma yiziphi izinja zempi ezisebenzayo , okusho ukuthi “uphumelele empini”
Frida - ukuthula
I-Fritzi - Ifanele emndenini ofuywa izilwane eziningi lapho i-GSD yakho iqinisekisa ukuthi wonke umuntu uphephile
UHeidi - Unomdlwane wama-stoic futhi ongesabi? UHeidi usho ukuthi “izikhulu”
UTrudy - Unesibindi futhi unesibindi, le nja yoMalusi waseJalimane unamandla wendawo yonke! '
Ute - inhlanhla
Ursula - ibhere elincane
Wanda - ukuzulazula
UZelda - ubusisiwe futhi uyajabula
Siyazi ukuthi uMalusi waseJalimane uyathandwa ukwethembeka kwayo kumnikazi wayo . Imidlwane ayihlukile. Ngezansi kunamagama wethu owathandayo amaGerman Shepherd umdlwane wakho osanda kuzalwa :
IBruiser - yebo, siyamazi uBruiser wayenguChihuahua kuLegally Blonde , kodwa, sisacabanga ukuthi igama liphakamisa imibono yeqhawe elinesibindi futhi elingesabi!
I-Bravo - Egqamile ngeSpanishi
Okugqamile - Okugqamile
UGoliyati - umuntu noma into ka ubukhulu obukhulu noma amandla !
UHercules - ezinganekwaneni zakudala, uHercules udume ngamandla akhe nokuzidela kwakhe
ULeia - i-Star Wars Princess kwakuyisithonjana sika-1980
I-Thor - ikakhulukazi isuselwa ezincwadini zamahlaya amaqhawe; UThor wayaziwa ngamandla akhe angaphezu kwawomuntu , isivinini nokuqina
UZeus - Inkosi Yonkulunkulu
Augustus - ngokubabazekayo
Apollo - UNkulunkulu wamaGrikhi futhi omunye wama-Olympians ayishumi nambili
UCesari - ngemuva kukaJulius Caesar?
U-Elroy - igama lomfana waseFrance
URingo - incazelo kaRingo empeleni yi-Apple, kepha igama laqala ukuthandwa ngemuva komculi nomshayi wesigubhu ovela eBeatles, Ringo Starr!
UCleo - ufushane ngoCleopatra, uMbusi waseGibhithe
UHermoine - umlingiswa oqanjiwe kaHarry Potter!
Ungahle ulingeke ukuthi uqambe igama lakho elithi Shepherd ngamagama osaziwayo abanabanikazi, noma abasenabo lolu hlobo oluhle kakhulu , zama la masaziwayo amahle aphefumulelwe Amagama Omalusi AseJalimane:
'Bella' Thorne noma 'Taylor' Lautner
Noma ungaqamba nje i-Comrade yakho ngemuva komanduleli owaziwayo:
UHorand - uqanjwe nge-GSD yokuqala!
I-Strongheart - enye yezinkanyezi zokuqala zefilimu yenja
Ama-Chips - the inja yempi ehlotshiswe kakhulu evela eWWII !
'Jet' njengaku iJet-black Shepherd yaseJalimane
I-Saffron (umbala ophuzi ngaphezulu)
I-Skippy (ibhotela lamantongomane)
Yuki - IsiJapane 'seqhwa'
Lapho ukhetha kulawa Magama Omalusi AseJalimane, khumbula, uzoba nalo impilo yakhe yonke.
Yigcine ilula, khetha eyodwa evumelana nobuntu bakhe nokuziphatha.
Noma ngabe ukhetha igama efeni lakhe laseJalimane noma ngisho nelilodwa ngokususelwa ekubukekeni kwakhe, qiniseka ukuthi uzokwazi ukulimemeza unqamule ipaki yezinja nokuthi awusiboni isidingo sokuthi 'uchaze' ukucabanga lapho umngena ngemvume kudokotela wezilwane.
inkosi yamahhashi uCharles spaniel bichon mix
umalusi waseJalimane oxutshwe ne-terrier
i-lab ephuzi nokuhlanganiswa kwebhokisi
amagama ayindida ezinja ezincane
Ibiza malini i-ridgeback ye-rhodesian